Ol-olaha talaalka iyo daawaynta xoolaha ee ceel xaar. - Cakaara News
Ol-olaha talaalka iyo daawaynta xoolaha ee ceel xaar.
Qabridahar(CN) ,November,24, 2015, Xafiska.xoolaha iyo hor.reer-guuraga DDSI ayaa si balaadhan uga bilaabay daawaynta iyo talaalka xoolaha guud ahaanba sabooyinka ceelasha waawayn ee deegaanka ee wakhtigan fadhiisimaha u ah xoolaha deegaanka gaar ahaan geela.
Haddaba sida uu ku soo waramayo wariyaha shabakada wararka cakaaNews ee gobolka Qoroxay waxaa ka bilowday degmada qabridahar iyo tuulooyinka hoos yimaada daawaynta iyo talaalka xoolaha taasi oo ay fulinayaan xirfadlayaasha xafiiska .xolaha iyo hor.reer guuraada DDSI oo kaashanaya kan deg.qabridahar isaga oo wariyuhu maanta gaadhay ceelka wayn ee ceel xoor oo ku yaala degmada qabridahar oo ay xiligaasi si xoog leh uga socoday daawaynta iyo talaalka xoolaha gaan ahaan geela.
Masuuliyiinta maamulka degmada qabrihadar oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha degmada qabrihadar mudane cabdilaahi sheikh axmed iyo madaxa xafiiska xoolaha iyo horumarinta reerguuraada degmada qabridahar mudane cabdikariin cumar daahir oo kormeer shaqo ku soo maray ceelka uu ka socto daawaynta iyo talaalka xoolaha ayaa warbaahinta uga warbixiyay ahmiyada uu leeyahay daawaynta iyo talaalka xoolaha.
Dhan kooda qaybaha kala duwan ee bulshada xoolaha loo daawaynayay ayaa si wayn u soo dhaweeyay kuwaasi oo u mahad noqay xukuumada DDSI ee dadaalka balaadhan ugu jirta sidii xoolahooda tayadooda loo xoojin lahaa loogana daawayn lahaa cudurada ku dhaca xoolaha.